Daawada Dabiiciga Ah Ee Sanboorka - Daryeel Magazine
Daawada Dabiiciga Ah Ee Sanboorka
Sanboor waxaa sababo xasaasiyad kiciye aan inta badan dhib u laheyn jirka. Sanboorku waa falcelin aan caadi ahyn oo uu jirka la sameeyo walxa aan dhibaato u kuhayn jirka. Manka ayaa ah xasaasiyad kiciyaha ugu badan ee sababo samboorka.
Maxaa sababa sanboor?
Marka jirkaaga uu la sameeya xiriir xasaasiyad kiciye, jirku wuxuu soo daynaa maado la yiraahdo histamine oo ah kiimiko kamid ah kuwa difaaca jirka uu isticmaalo, kiimikadadwaxay sababeysaa astaamaha sanboorka lagu garto.
Xasaasiyad kiciyaasha waxaa kamid ah
Inta lagu guda jiro xilliyada qaar ee sanadka, waxaa laga yaabaa in uu bato sanboorka, sida xiliga qaboobaha iyo guga.
Maxaa lagu gartaa?
Waxaa lagu gartaa calaamadahaan hoos ku xusan:
Cuncun sanka ama indhaha
Daawada dabiiciga ah ee sanboorka:
Cilmibaaris lagu sameeyay 68 qof oo sanboor qabo ayaa waxaa looga daaweeyay saliida xabad sowdada, iyadoo weliba sanboorkii kaga buuray badankood, meesha awal ay qaadan jireen daawooyin dhowrkii maalmoodba weliba qaarkood ay waxyeello daawada ku reebtay.
Cilmibaaristu waxay sheegtay in saliida xabad sowdada subax kasta sanka duleeladiisa min hal dhibic lagu dhibciyo iyadoo gadaal loo neefsanayo, waxaana la wadayaa muddo 6 usbuuc ah, tan oo aad kaga reysan doontid ilaahay idinkii daawo sanboor.
Ilmaha yar ha ku dhibcinin saliida xabad sowdada ee labada farood foodooda saliida mari, kadibne waxaad ku aadinaysaa labada dul ee sanka, waxaana ilmaha amraysaa inuu neefsado, hadduu yar yahay oo uusan amarkaaga qaadan karin, ku hay sidaa muddo 1 daqiiqo ah isagaa si aayar ah u neefsan doono, waa muhiim in ku daaweynta ugu yaraan la wado 6 usbuuc si wax looga garto, kuna dadaal hal maalin in aadan illaawin.
Xigashada Cilmibaarista: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23855426
Daawada Dabiiciga Ah ee Hergabka Daawada Dabiiciga ah ee Madax Xanuunka Sirta Iyo Faaidooyinka Ku Jira Xabad Sowdada Daawada Bidaarta Iyo Timaha Daata